Maxaa ka jira musuqa lagu eedeeyay Wasiir Saalax Axmed? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa ka jira musuqa lagu eedeeyay Wasiir Saalax Axmed?
Waxaa soo baxaya eedeymo la xiriira in Wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha uu musuq maasuq ku sameeyay Wafdiga Dowladda Federaalka Soomaaliya uga qeyb gali dooni shirka Shaqada Aduunka oo ay soo qaban qaabisay hay’adda ILO, kaasi oo 28-ka bishan May lagu wado in uu ka dhaco Magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Ilo ku dhow Xafiiska Wasiir Saalax ayaa u sheegay Shabakada Mareeg Online in Wasiirka uu doonayo in shaqsiyaad gaar ah uu ku wado fiisooyinka, kuwaasi oo doonayo Yurub.
Baaritaan ay sameysay Shabakada Mareeg Online kadib ayaa waxaa soo baxday in Afar ruux oo ka mid ah Lixda qof ee Soomaaliya u mataleysa Shirka ILO ay ka soo jeedaan Beesha Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, waxaana sidoo kale 4-taas qof midkood lagu sheegay in uu yahay mid ka mid ah Wiilasha la dhashay mid ka mid ah Shaqaalaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Balse, lama oga hadii uu ka warhayo musuqan soo baxaya Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre.
Magacyada 4-ta Shaqsi sida dadban loogu daray Wafdiga Soomaaliya uga qeyb galaya Shirka ILO ayaa lagu sheegay Axmed Xasan Cumar, Saciid Cali Maxamed, Yaqub Cali Macallin iyo Cabdilqaadir Cayil Maxamuud, waxaana lagu wadaa in ay ka soo muuqdaan Safaarada Swiztherland ee Nairobi.
Fadeexadahan soo baxaya ayaa waxey noqonayaa eex ama musuq maasuq heerkiisu sareeyo oo ay ku kacday Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha ee Xukuumadda Soomaaliya.
Sikastaba, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre wuxuu ku nuuxnuuxsaday in uu la dagaallami doono musuqmaasuqa , markii loo dhaarinayay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha xili uu ka khudbad ka horjeedinayay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliyeed.
Xildhibaan Daahir oo Caawa lagu dilay Magaalada Gaalkacyo
Waa maxay Ogeysiiska uu soo saaray Taliska Ciidanka Xooga?